Ampidino Stellarium 0.14.1 ho an'ny Windows
Sehatra: Windows Version: 0.14.1 Fiteny: English
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (129.29 MB)
Ampidino Stellarium, Raha te-hahita ny kintana, planeta, nebulae ary na dia ny fomba milky any an-danitra aza ianao avy eo aminny toerana misy anao tsy misy teleskaopy, Stellarium dia mitondra ny tsy fantatra habakabaka aminny efitranonao aminny 3D. Stellarium dia mamadika ny solosainanao ho planetary maimaim-poana. Azonao atao ny mandeha aminny dia mahavariana miaraka aminny programa izay mampiseho ny lanitra manontolo araka ny fandrindrana napetrakao.
Stellarium dia programa tsy manam-paharoa izay mitondra io sary 3D io ihany izay azo jerena aminny teleskaopy aminny solosaina. Ilay interface tsara sy tsotra ao aminilay programa dia mamela anao hitady sy hanao zoom mora foana. Ny programa dia manana katalaoginny kintana 600 000 ary fampisehoana fomba milky tena misy.
Ny atmosfera, ny fiposahanny masoandro sy ny filentehanny masoandro, ny planeta sy ny volana dia hita taminny sary mihetsika tena zava-misy. Ho fanampinizay, mamela anao hamorona ny lanitrao ny programa.Araka izany, planeta sy kintana dia azo apetraka araka izay tianao.
Haben'ny rakitra: 129.29 MB
Fanavaozana farany: 16-04-2021